Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Md Eugène » Nanokatra ny sisin-taniny i Statia
St. Eustatius dia hanokatra ny sisin-taniny amin'ny Alahady 9 Mey 2021
Ny mpitsangatsangana rehetra dia tsy maintsy manao vaksiny feno
Ireo mpitsidika izay tsy vita vaksiny tanteraka dia tokony hiditra amin'ny quarantine mandritra ny 10 andro
Ny dingana fahatelo amin'ny sarintany dia hanomboka rehefa vaksinin'ny 50% ny mponina ao St. Eustatius
Ny Public Entity St. Eustatius dia hanokatra ny sisintaniny amin'ny alahady 9 mayth, 2021 tamin'ny fampidirana ny dingana faharoa amin'ny sarintany. Hatramin'ity daty ity dia afaka miditra ao amin'ilay nosy ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviana sy Statians izay te hiverina hody. Ary ireo mpitsidika avy any Curaçao, Aruba, St. Maarten, Bonaire ary Saba dia raisina an-tanan-droa any Statia. Ny fepetra tokana dia ny tsy maintsy anaovana vaksiny feno ireo mpandeha rehetra tonga.
Ny olon-drehetra koa dia afaka mitsidika an'i Statia fa tsy maintsy miditra amin'ny quarantine mandritra ny 10 andro raha tsy vita vaksiny tanteraka.
Ny dingana fahatelo amin'ny sarintany dia tsy manana daty fanombohana fa hanomboka rehefa vaksiny 50% ny mponina ao St. Eustatius. Rehefa tratra izany dia afaka tonga any Statia ireo mpitsidika vita vaksinina tanteraka raha tsy misy quarantine mandatory mandritra ny 10 andro. Hatramin'izao dia 879 ny isan'ny olona (izany hoe 37%) no nahazo ny fatra roa tamin'ny vaksinin'ny Moderna.
Amin'ny dingana fahefatra dia afaka miditra ao amin'ilay nosy ny olon-drehetra, tsy mpitsidika vita vaksiny ihany koa, raha tsy mila miditra amin'ny quarantine. Ny fepetra dia ny tsy maintsy hanaovana vaksiny ny ankamaroan'ny mponina Statian, izay 80%.
Ny fanalefahana ny fepetra dia nanomboka tamin'ny 11 aprily 2021 izay dingana voalohany amin'ny sarintany momba ny fanokafana ny nosy. Hatramin'io andro io, ny mponina Statian izay vita vaksiny tanteraka dia tsy mila mankany amin'ny quarantine intsony rehefa miditra any Statia aorian'ny fitsangatsanganana any ivelany.
Ny fanapahan-kevitra hanamora kokoa ny fepetra dia noraisina taorian'ny fandinihana tsara ary rehefa avy nifampidinika ireo mpiara-miasa lehibe voarohirohy. Ireo dia ny Ministeran'ny Fahasalamana, Fiaraha-miasa ary fanatanjahan-tena any Netherlands (VWS), ny National Institute for Health and Environment (RIVM), ny Departemantan'ny fahasalamam-bahoaka ary ny ekipan'ny Crisis Management any Statia.